Taunggyi - The Cherry Land: တောင်ကြီးမြို့ဖြစ်တည်လာပုံ - ၁
တောင်ကြီးမြို့ဖြစ်တည်လာပုံ - ၁
ယခုဖော်ပြပါ အချက်အလက်များသည် တောင်ကြီးမြို့နှစ်တစ်ရာပြည့် အထူးထုတ် မဂ္ဂဇင်း ထဲမှ မောင်ခွန်နွယ်(အင်းလေး) ရေးသားထားသော တောင်ကြီးမြို့မှတ်စု ထဲမှ ဖြစ်ပါသည်။
တောင်ကြီးမြို့နေရာသည် သက္ကရာဇ် ၁၂၀၀ ခန့်လောက်က တည်ရှိနေ ခဲ့သော ပအိုဝ်းရွာလေး တစ်ရွာရှိခဲ့၏။ ထိုရွာ၏ အမည်မှာ ဒုံတောင်တီ ဟုခေါ် လေသည်။ ရှမ်းအသံဖြင့် တွမ်တီး ဟုခေါ်သည်။ တောင်ကျည်း၊ တွမ်းတီး ဟုမြန်မာအသံ တောင်ကြီး ဟူသည်မှာ တည်ပင်နှင့် တူသော အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောအရပ်တွင် ကတည်ပင် ဟုလည်း ခေါ်ပါသည်။ ၄င်းအပင်ပေါက်ရာ ရွာဟုဆိုလိုပါ၏။ ထိုရွာနှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ပင်လုံရွာ ၊ ရှမ်းရွာ ၊မွန် ခြိန်ရွာ နှင့် ၀ါးပြားရွာ များသာ ရှိပေသည်။၄င်း အပြင် ရေကန် ၄ ကန်နှင့် အင်းကြီးတစ်အင်းလည်း ရှိသည်။ အင်္ဂလိပ် အစိုးရသည် တောင်ကြီးမြို့ကို မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၂၅၃-ခု ၊ ခရစ်နှစ် ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြို့တည်ခဲ့ပေသည်။ တောင်ကြီးရွာကို မြို့တည် ပြီး ထိုရွာနှင့်တဆက်တည်းဖြစ်သော ကန်များ၊ အင်းများကို ပြုပြင်ကာ တောင်ကြီးမြို့ကို မြို့တော်ဖြစ်အောင်မွန်းမံခဲ့သည်ဟု ယုဝတီမာလာသိန်းက ယုဝတီ ဂျာနယ်တွင် မဟာပါသဏမုံတ၀ဂူလိုဏ်ဂူ ဆောင်းပါးတွင် ရေးသားထားသည်ကို မှတ်သားရပေသည်။
မှတ်တမ်းအရဆိုပါက တောင်ကြီးမြို့ကို တည်သည်မှာ နှစ် ၁၀၀ ပင်ကျော်ခဲ့လေပြီ။ သက်ကြီးရွယ်အို တစ်ဦး ၏ ပြောပြချက်အရ ၁၂၅၁ ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီးမြို့ကို တည်သည်ဟု မှတ်သားရပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် တောင်ကြီးမြို့တည်သည့် ခုနှစ်နှင့် ပတ်သက် ၍၀ိဝါဒ အမျိုးမျိုးဖြစ်နေသည်။ အဖြေရှာကြည့်ရာ ၁၂၄၇-ခုနှစ်တွင် နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့ အထက်မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက် သဖြင့် ထိုကာလွန် ၃ နှစ်သည် နယ်ချဲ့တို့ရှမ်းပြည်ဖက်သို့တက်လာကာ မိုင်းသောက် (ညောင်ရွေမြို့နယ်) ကို ရုံးစိုက်ခဲ့သည် ကာလဖြစ်နိုင်ပေသည်။
မိုင်းသောက်ဒေသသည် ငှက်ဖျား မရှိသဖြင့် ရုံးပြောင်းရွေ့စိုက်သည့်နေရာ ကိုရှာဖွေ ကြပြန်ရာ ယခုတောင်ကြီးမြို့၏ အရှေ့ဘက် (ယခု ဓမ္မရတနာကျောင်း၏ အရှေ့ဘက်(၂)မိုင်အကွာ) တွင် ၁၂၅၁-ခုနှစ်ခန့်၌ ပြောင်းရွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ရာသည်။ ထိုဒေသသည် ပြန့်ပြူးညီညာသဖြင့် မြို့တည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
ရေးသားသူ ကျော်စွာ အချိန် 7:27:00 PM
nice topic, I am waiting to read.
Thanks ကျော်စွာ :)
Monday, August 27, 2007 5:43:00 PM
Thursday, November 12, 2015 8:32:00 AM
Friday, April 08, 2016 8:12:00 AM
Kanbawza Youth Library (2)
Shan State Museum
အမှတ်တရ တောင်ကြီး ဓါတ်ပုံများ
တောင်ကြီးမြို့ဖြစ်တည်လာပုံ - ၂
မီးပုံပျံကွင်းသစ် ပထမအကြိမ် စမ်းသပ်လွှတ်တင်
မောင်၊မယ် သစ်လွင် ကြိုဆိုပွဲ ပအို(၀်)
user@taunggyicherryland.com (သို့) တောင်ကြီးချယ်ရီ...
Rolling Stars - part 1
Who is Admin?
ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရား [Foggy Version]
water fall (or) ရေတံခွန်
အင်းလေးဒေသ သစ် ၀ါး ဈေးကြီး
Way to Taunggyi
မိကျောင်း . . . . . . မိကျောင်း
ကျွန်တော်နှင့် တောင်ကြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ် (၂)
ကျွန်တော်နှင့် တောင်ကြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ် (၁)
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ
The Ranch နဲ့ ၂လပြည့် အမှတ်တရပွဲ
တောင်ကြီး ချယ်ရီ နဲ့ ကျွန်တော်
၂ လပြည့် လက်ဆောင်
၂ လ ပြည့် လက်ဆောင်
ICT Resource Center MCPA (Shan State)
ဥဏ္ဏလုံ မွေရှင်တော် စေတီတော်မြတ် သမိုင်း
ဥဏ္ဏလုံမွေရှင်တော် စေတီ၊ သဘာဝလှိုင်ဂူဘုရား ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅
သို့ . . . အတိတ် မနက်ခင်းများ . . .